Mifikitra amin'ny fanavaozana, manaraha miaraka amin'ny Times, ny fikatsahana fanahin'ny orinasa MAXIMA tonga lafatra dia manao ezaka lehibe hihaonana amin'ny fangatahan'ny mpanjifa sy ny fanavaozana tsy tapaka, any ankoatra. MAXIMA dia niasa tamin'ny fanavaozana ny Heavy Duty Wireless Column Lift amin'ny fotoana ...
Ao amin'ny 2018 Automekanika Frankfurt, tontolon'ny varotra manerantany ho an'ny indostrian'ny serivisy fiara, MIT AUTOMOBILE SERVICE CO, LTD (MAXIMA), miorina amin'ny Hall 8.0 J17, habe: 91 sqm. nampiditra vokatra mavesatra asa mavesatra mavesatra, manokatra faritra vaovao amin'ny Platform Lif ...
Fananganana sehatra mavesatra ny adidy, ampitahao amin'ny fiakaran'ny tsanganana finday, afaka mamela sy miala haingana. Ny ankamaroan'ny sanganasa amin'ny fiara ara-barotra dia fitsapana sy fikojakojana tsotra, izay tokony ho vita haingana. Miaraka amin'ny fananganana Platform, ny mpandraharaha dia afaka miatrika ireo asa mora ireo, izay afaka mamonjy y ...